किन खाने रायोको साग ? यस्ता छन अचम्मका फाइदा सबैले जानी राखौं - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com किन खाने रायोको साग ? यस्ता छन अचम्मका फाइदा सबैले जानी राखौं - खबर प्रवाह
एजेन्सी । साग आफैंमा उपयोगी तरकारी हो । पकाएर र काँचै खान मिल्ने साग स्वादिलो पनि हुन्छ । त्यसमा पनि रायोको साग बहु उपयोगी हुन्छ । संसारभर पाइने अनकौँ तरकारीमध्ये दोस्रो बढी पोषणयुक्त तरकारीमा रायो पर्छ । तसर्थ, रायो स्वास्थ्यका दृष्टिले झनै लाभदायक छ । धेरै पकाउँदा भने यसमा रहेका पोषण तत्व नष्ट हुन सक्छ ।यो उपयोगी रायोको सागका फाइदा थाहा पाउनुहोस् : रायोको सागमा भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । रतन्धो, पुरानो बाथ, कफ आदिबाट बच्न रायो उपयोगी हुन्छ ।रायोमा पाइन्ने भिटामिन ए, सी र केयुक्त तत्वले हाम्रो शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छन् ।
‘सुकुम्बासीका नाममा धेरै आयोग बने, अब हामी समाधान गर्छौँ’
राशिफल : २०७८ साल भाद्र ३१ गते बिहिबारको निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल